Sandamuni စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← Kyuk ပိုက်ဆန်လျှော်စေတီတော်ခဲ့သည်
Mahamuni ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်း →
အဆိုပါ Sandamuni စေတီတော် မန္တလေးတွင်, မြန်မာ 64 လမ်းအတွက်အဓိကဝင်ပေါက်နှင့်အတူတော်ဝင်နန်းတော်ကျုံး၏အပေါ်ဆုံးညာဘက်ထောင့်အနားမှာမန္တလေးတောင်၏ခွမှာတည်ရှိပါတယ်.
ရှိပါတယ်3ဤနေရာတွင်ဘုရားသုံးဆူနားမှာနီးပါးခြမ်း. အနောက်နိုင်ငံများတွင်ကျောက်ဖြူ Taw Gyi စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်, အလယ်မှာ Sandamuni စေတီတော်နှင့်အရှေ့ Kuthodaw စေတီတော်မှ. အခြားနေတုန်း2Sandamuni အရှေ့အနောက်မှတစ်ဦးကြီးများ rectangular ရှုပ်ထွေးပြေးသည်သာမန်စတုရန်း shaped layout ကိုဖြစ်ကြသည်.
Sandamuni မှာအဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုမန္တလေးတောင်ကိုတက်ကောင်းသောအမြင်များပါဝင်သည်, ကျော် 1700 ရေးထိုးစကျင်ကျောက်ပြားရာသပ်သပ်ရပ်ရပ်အတန်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ကွန်း, ဗုဒ္ဓ၏မူလ diciples ၏ရုပ်ပွားတော်များသေးငယ်တဲ့ကွန်းများစွာ, ရွှေတိဂုံဘုရား၏ဗဟိုမှာကြီးမားသောရွှေစေတီတော်ကို, နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသံဗုဒ္ဓရုပ်ထုဟာ Sandamani ကိုခေါ်.
ဗဟိုစေတီတော်အတွက်မင်းတုန်းမင်းကတည်ဆောက်ခဲ့သည် 1874 မိမိအအသတ်ခံငယ်ရွယ်ဝက်ညီအစ်ကိုအိမ်ရှေ့မင်းသားကနောင်တစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ်.
ဗဟိုစေတီတော်မှရရန်သင့်အားကွန်းတန်းမှတဆင့်ဖုံးလွှမ်းဖို့အတွက် walkway ချသွားတော်ဓမ္မ Cetis ကိုခေါ်. တစ်ခုချင်းစီကိုနတ်ကွန်းတစ်ခုတည်းကျင်ကျောက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပါရှိသည်, အကြမ်းအားဖြင့်ကျယ်ပြန့် 1 မိခြင်းနှင့်အရပ်ရှည်ရှည် 1.5. အဆိုပါပြားဗုဒ္ဓ၏သွန်သင်ချက်အပေါ်ဝေဖန်နှင့်အတူထွင်းထားပါသည်. ဗဟိုစေတီတော်တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်မှာ 1874 ဒါဟာသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ 40 နှစ်ကြာပြီးနောက်န်းကျင် 1914 သေးငယ်တဲ့ကွန်းကဝန်းရံရန်တည်ဆောက်ခဲ့.
ဗဟိုမှာပထမဦးဆုံးရပ်တန့်သံဗုဒ္ဓရုပ်ထုဟာနတ်ကွန်းအိမ်ရာဖြစ်ပါသည်. မူလက built-in 1802 ဒါကြောင့်၌ဤအစက်အပြောက်မှအမရပူရမှာတော်ဝင်နန်းတော်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် 1874 မင်းတုန်းမင်းအားဖြင့်. သင်ကယခုရွှေရုပ်တုတူဒီတော့ပူဇော်ကတည်းကကိုရွှေအရွက်သတ္တုပါးနှင့်အတူအားလုံးအပေါ်ဖုံးရှိသည်ဟုကြောင့်သံဖန်ဆင်းထားသည်မပြောနိုင်.
ဒါဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ရတာဟာသောအနီးအနား Kuthodaw စေတီတော်ဖို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဆင်တူသည်သို့သော်သေးငယ်ပြီးပိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါသည်. Kuthodaw ကွန်း၏အတန်းအကြားသစ်ပင်နညျးလမျးနှငျ့ထှကျပြန့်နှံ့နေသည်သူတို့အားလုံးနားမှာအတန်းဘက်၌ထစီတန်းနှင့်ကြား၌အနည်းငယ်သာအာကာသနှင့်အတူဗဟိုစေတီတော်အနီးအနားတွင်နေကြပါတယ် Salamundi မှာ wheras.
သင်နေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း Sandamuni စေတီတော် မန္တလေးတွင် – Google ကမြေပုံ
Sandamuni စေတီတော်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရန်အလွန်တော်တော်နှင့် compemplative အစက်အပြောက်နှင့် shaded ဖို့အတွက် walkway ထိုနေ့၏အပူထဲကသငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့ကြိုဆိုနည်းလမ်း. ကြည့်ရကျိုးနပ်.
Posted in, မန္တလေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	permalink